News | MyanmarCele
On the full moon day of Thidingyut, the pagodas in Rangoon will offer lamps according to the guardian plan
The public will not be allowed to visit the pagoda. On the full moon day of Thadingyut,aBuddhist holiday, pagodas in Rangoon will not be allowed to visit the pagoda and will only offer lanterns by the board...
State Counselor Aung San Suu Kyi visits helicopter purchased from Italy
State Counselor Aung San Suu Kyi arrives in Nay Pyi Taw forastate-owned helicopter purchased for disaster management and state affairs, including search and rescue and emergency response. Helicopter purchased from Italy (Myanmar registration number XY-AFT) arrived in Yangon...
သူ့ကိုမေ့နေပြီလား ?? မချယ်ရီထက်အခြေအနေမကောင်းပါဘူး
သူ့ကိုမေ့နေပြီလား ?? မချယ်ရီထက်အခြေအနေမကောင်းပါဘူး အမက အမေ့ကိုလာဖမ်းကျတဲ့နေ့မှာ လာခေါ်တဲ့ ဗိုလ်မှူးတွေနဲ့စကားအချေအတင်များပြီး ဗိုလ်မှုးကိုသေနတ်ချိန်ခဲ့တဲ့ အာဂအမျိုးသမီးပါ အမေ့အတွက်သေသေရှင်ရှင် သူကာကွယ်ပေးခဲ့တာ အမေ့စကားတခွန်းမှာ သူငြိမ်နေပေးခဲ့တာ အခု အမသတင်း လုံးဝမကောင်းပါဘူး ကျမတို့ အမအတွက်လဲ ဆုတောင်းပေးရအောင်ပါ
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အကျိုးစီးပွားကို ဦးစားပေးပြီး အာဏာသိမ်းခြင်းဟု ဦးဝင်းထိန်ပြော
“ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုး၏ အကျိုးစီးပွားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း မရှိဘဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အကျိုးစီးပွားကိုသာ ဦးစားပေးသူ” ဟု ယနေ့ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် သဘာပတိ ဦးဝင်းထိန်က ဝေဖန်လိုက်သည်။ “တရားဝင် အစိုးရ၊ ပြည်သူလူထုကနေ Mandate ပေးထားတဲ့ ပြည်သူလူထုကနေ ရွေးချယ်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖမ်းလိုက်ပြီဆိုကတည်းက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဟာ မထူးဇာတ်ခင်းသွားပြီ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ ယနေ့ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်...
The President urges all democrats to act in accordance with the law without compromising their rights
President U Win Myint urges all democrats to act in accordance with the law without compromising their rights. President U Win Myint said, “We must work to strengthen the foundations of democracy in our country. We must strive for a...
US to increase investment in Myanmar in post-Kovis era
The United States will increase its investment in Myanmar in the post-Kovis period, said Adam Bowler, chief executive of the International Development Finance Corporation (DFC). The DFC isaUS financial institution established in 2019 under the Better Utilization of...